Wasiirka Wasaaradda Haweenka oo Mareykanka uga qeyb galaysa shir caalami ah – Radio Muqdisho
Shir looga hadlayo ka hortagga tacdiyadaha loo geeysto haweenka oo sanad waliba lagu qabto dalka Mareykanka ayaa ka furmay dalkaasi, iyadoo Soomaaliya ay shirka uga qeyb galeyso wafdi ay hogaaminayso Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka Sahro Maxamed Cali Samatar oo la hadashay Laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegtay in shirkan uu yahay kii 59aad oo caalami ah, isla markaana looga hadlayo qodobo ku saabsan in wax laga qabto xadgudubyada loo geysto dumarka.
“Sidii haweenka doorkooda loo xoojin lahaa iyo xuquuqul insaanka ayaa looga hadlayaa, waa shirkii 59aad ee lagu qabto Mareykanka, sanad waliba waxaa la go’aansadaa maxaa wax laga qabtay oo xagga tacadiyadaha dumarka loo geysto, sanadkan waxaan rajeynaa in arrimo badan la isla meel dhigi doono” ayay tiri Sahro.
Sahro Maxamed Cali Samatar ayaa hoosta ka xariiqday in ay diyaarineyso sidii loo dhameystiri lahaa sharciyada ku saabsan ka hortagga xadgudubyada dumarka.
Baydhabo oo lagu soo xirey shir Hiigsiga cusub looga hadlaayay